भोलिको भेला पार्टी एकताका लागि हो : सुरेन्द्र पाण्डे – Nepal Press
भोलिको भेला पार्टी एकताका लागि हो : सुरेन्द्र पाण्डे
२०७७ चैत ३ गते १४:४०
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहले भोलि र पर्सि आयोजना गरिएको गुट भेला पार्टी एकताकै लागि भएको दाबी गरेको छ । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले केपी ओली समूह पार्टी फुटाउन अग्रसर रहेको प्रत्यारोप लगाए ।
नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भने, ‘पार्टी विभाजनको आरम्भ ओलीजीले गर्नुभएको हो । २८ गतेको बालुवाटार वैठकले विभाजनको बिजारोपण गरेको हो । ती सबै निर्णय फिर्ता नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव छैन ।’
आफूहरुले गरेको गुट भेला भने विधानसम्मत रहेको उनले प्रष्ट पारे ।
‘पार्टीको विधानले यस्ता भेला तथा राजनीतिक गतिविधि गर्ने छुट दिएको छ । भोलि र पर्सिको भेला पार्टी एकताको सुदृढीकरणका लागि हो ’, पाण्डेले भने ।
अध्यक्ष ओलीले भोलिको भेलामा उपस्थित हुनेहरुलाई कारबाहीको चेतावनी दिनुभएको छ नि ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा पाण्डेले ओलीमाथि नै कारबाही हुन सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘आफैं गलत आधारमा खडा भएको अध्यक्ष कारबाहीको भागीदार हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो अस्तिको कदम नै गलत र कारबाहीयोग्य थियो । यसप्रकारको कारबाहीको कुरा गर्नु कार्यकर्तालाई अनावश्यक तर्साउन खोजिएको मात्र हो ।’
प्रकाशित: २०७७ चैत ३ गते १४:४०
महाकालीको टापुमा फसेका पाँचजनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
चीनले नेपाललाई थप २० लाख डोज खोप अनुदान दिने
‘बा’संस्कृति, ओली र ‘गोकुल–महेशधन्दा’